Qarax loo adeegsaday gaari ayaa ka dhacay afaafka hore ee dekadda magaalada Mogadishu… – Hagaag.com
Qarax loo adeegsaday gaari ayaa ka dhacay afaafka hore ee dekadda magaalada Mogadishu…
Posted on 4 Luulyo 2020 by Admin in National // 0 Comments
Waxaa saakay qarax xoogan oo ismiidaamin ah uu ka dhacay afaafka hore ee dekadda magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta laanta Canshuurha ee loo yaqaan Turubataariyada.
Qaraxan ayaa loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo nuuciisa lagu sheegay Surf, gaarigan ayaana ku qarxay darbiga xarunta Laanta canshuuraha Booliiska ee kutaala banaanka dekadda .
Inta la xaqiijiyay qaraxan waxaa ku dhintay ruuxii waday gaariga waxyaabaha qarxay laga soo buuxiyay, waxaa sidoo kale la sheegay in qaraxa ku dhaawacmeen afar askari oo katirsan Booliiska.
Goobjooge ku sugan goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa Warbaahinta u sheegay in gaariga qarxay xili uusan gaarin albaabka xarunta Turubataariyada, waxa uuna xusay in qaraxan uusan ka dhalan khasaaro badan.
Laamaha amaanka dowlada Soomaaliya ayaan wali ka hadlin qaraxan saakay ka dhacay magaalada Muqdisho iyo khasaaraha ka dhashay, waxaana saraakiisha Booliiska sheegeen in warbaahinta dib uga faah faahin doonaan qaraxa.
Qaraxan saakay ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa imaanaya xili magaalada bilihii ugu dambeeyay ka nasatay qaraxyada ismiidaaminta ah, waxaana qaraxan saakay ahaa mid jugtiisa si weyn looga maqlay Muqdisho cabsi badana ku beeray shacabka.